China Water Water project - ego ole ka ikwesiri iji wuo ụlọ ọrụ ebe a na-egwu mmiri ebe ndị nrụpụta mmiri | Nnukwu ọdọ mmiri
Sauna na ọdọ mmiri SPA
Mmiri mmiri na-ekpo ọkụ
Pool Equipment nhazi
Pool Construction Nka na ụzụ Nkwado
Igwu Pool Equipment
Ọdọ mmiri iyi
Ọdọ mmiri Disinfection System
Ọdọ mmiri kpo oku na dehumidifying sistemụ
Pool Lighting usoro
Igwe anaghị agba nchara Pool Ladder
Sauna & spa Ngwa
Oru ogwu mmirichukwu-ego ole ka odi mkpa iji wuo ebe igwu mmiri
Ndị ahịa anyị na-enwetakarị ozi dị ka nke a: Ego ole ka ọ na-ewe iji wuo ebe igwu mmiri? Nke a na-eme ka o siere ndị ahịa anyị ike ịza. Nke a bụ maka na ịwuru ọdọ mmiri bụ ọrụ dị n'usoro, ọ bụghị dịka m chere na m nwere ebe, gwuo olulu ma wuo ya. Pịa brik, jikọọ ọkpọkọ ole na ole, ma tinye nfuli ole na ole. Ọ bụrụ na ị mee nke a, ebe igwu mmiri gị nwere ike igwu ma gbawaa karịa otu oge igwu mmiri. Site na ihipu mmiri, na oke iyi egwu nchekwa nke ndị na-egwu mmiri, itinye ego gị ga-ala n'iyi. Ihe dị n'elu bụ ezigbo ọnọdụ nke otu n'ime ndị ahịa anyị.
Ka anyị buru ụzọ webata ka esi wuo ebe igwu mmiri.
Nke mbu, ikwesiri inwe ebe, mgbe ahụ ịchọta ụlọ ọrụ na-ewu ụlọ iji gwa ụlọ ọrụ na-ewu ihe n'ụzọ zuru ezu ụdị, nkọwa na akụrụngwa ala (dịka ụlọ na-agbanwe agbanwe, ụlọ mposi, wdg) nke ebe igwu mmiri ịchọrọ ịmalite. , ma kwe ka ụlọ ọrụ na-ewu ihe nyere gị aka ịhazi na mmefu ego, na n'ikpeazụ Nye ụlọ ọrụ ihe owuwu gị ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ebe a na-egwu mmiri dị ka anyị, anyị ga-ewezigharị eserese pipeline na-ekesa, ihe eserese na-ekesa, eserese sekit, wdg. , ma nye gị nzaghachi na oghere achọrọ maka ụlọ kọmputa dịka akụrụngwa (ịkwesịrị ịkọ ebe a) Ka ụlọ ọrụ na-ewu ụlọ rụọ ọrụ dịka achọrọ). Mgbe ị kwenyere na atụmatụ ahụ, anyị ga-enye gị nkọwa zuru ezu.
Ya mere, enwere ike ịchịkọta ego achọrọ iji wuo ebe igwu mmiri gaa n'akụkụ atọ: otu bụ ego maka ala, nke ọzọ bụ ego maka iwu, na nke atọ bụ ego maka ihe eji emegharị ihe. Ya mere, tupu iwuru ọdọ mmiri, a na-atụ aro ka ị buru ụzọ ghọta mmefu ego nke ihe ọ bụla dị n'elu (ọ bụrụ na enweghị eserese imepụta, ọ nwere ike ịbụ atụmatụ siri ike, enwere ike ịnwe nnukwu mperi). Ọ bụrụ na ọ gafere ngụkọta ego gị niile, Mgbe ahụ ị nwere ike mejuputa ya.
The igwu mmiri mgbasa akụrụngwa oru ngo tumadi na-agụnye: ọkpọkọ, ekesa mmiri nfuli, nyo ájá tank, akpaka nlekota na dosing usoro, kpo oku akụrụngwa, ike nkesa, wdg Ya mere, na-enweghị ụkpụrụ ụlọ imewe Eserese, anyị na-enweghị ike ịgụ ọkpọkọ na niile, na ma ọkụ mmiri dị n'okpuru mmiri dị mkpa Ichere gụnyere ụgwọ nke wires. Ya mere, ọ bụrụ na enweghị eserese na akụrụngwa anaghị akọwapụta ya, atụmatụ anyị ga-adịgasị iche iche. N'ebe a, anyị na-eji ọdọ mmiri abụọ na-esonụ dị ka ntụnye aka.
Swimminglọ mmiri mmiri mmiri (50 × 25 × 1.5m = 1875m3): enweghị kpo oku, ọkụ, sistemụ ozone
Atụmatụ na atụmatụ nke imegharị ihe maka iji akụrụngwa akụrụngwa bụ ihe dị ka 100000usd. (5 na-etinye nfuli mmiri 15-hp, 4 na-edozi 1.6-mita sand filter, na usoro nyocha usoro nyocha)
Ọkara ọdọ mmiri ọkọlọtọ (25 × 12 × 1.5m = 450 cubic mita): enweghị kpo oku, ọkụ, ozone usoro
Atụmatụ na ego nke imegharị ihe maka iji akụrụngwa akụrụngwa bụ ihe dị ka 50000usd. (4 na-etinye nfuli mmiri 3.5-hp, 3 na-eme nhazi nzacha 1.2-mita, na usoro nyocha usoro nyocha)
Dongfang Tianxiang Plaza, Nkebi nke etiti nke Tianfu Okporo ụzọ, Mpaghara Teknụzụ, Chengdu City, Sichuan Province, China
Bido ebe a na-egwu mmiri
Featured ngwaahịa, Sitemap
Ọrụ Igba mmiri, Igwu Ulo Okpu, Igwu Mmiri Pool, Rooftop Pool Ngwa, Igha mmiri nke Ọha, Igwu Pool Ngwọta,